A mbipụta: Biputa na Ntinye na Mmezu | Martech Zone
Otu n'ime echiche efu nke ịda mba bụ na ị na-efunahụ uru ka ị na-akwụ ndị ọzọ na-eweta ụgwọ ibipụta ma mejupụta ngwaahịa gị. Nke ahụ abụghị eziokwu ma ọlị. Ihe esemokwu bụ nnukwu mbido mbido iji wuo ebe nchekwa gị na ebe mmezu iji kwado uto.
A na-ebipụta mbipụta na-ebipụta akwụkwọ ma na-emezu ihe eji eme ya nwere usoro mmezu siri ike na-acha ọcha na ụdị uwe na arịa ụlọ dị iche iche enwere ike ịhazi aha gị. Ma ị ga-achọ ịme ngwaahịa dịgasị iche iche maka azụmaahịa gị niile ma ọ bụ na ịchọrọ ịnye ngwaahịa nke aka gị maka ọrịre, Mbipụta bụ ụzọ dị mma iji bulie ngwa ngwa.
Akwụsịla ebe ahụ. Ọ bụ ezie na ndị na-ebipụta akwụkwọ bụ ndị na-eweta mbipụta akwụkwọ na ọrụ mmezu… ị ka chọkwara ikpo okwu ecommerce yana azụmaahịa akpaaka iji kwụsị ịzụ ahịa ịzụ ahịa na ozi ndị ọzọ.
A na-agabiga iwu gị site na ngwa ngwa Mbipụta na saịtị ecommerce gị… yabụ na ị gaghị eme ihe ọ bụla mana ị ga-arụ ọrụ na okike gị ma zụọ ahịa gị.
Otu n'ime ike nke mbipụta akwụkwọ bụ igwe mockup siri ike ya na onyonyo ngwaahịa dị iche iche enwere ike tinye n'ime saịtị ecommerce gị. Naanị bulite ihe okike gị, họrọ ụdị ngwaahịa na nkọwapụta, wee mepụta onyonyo ịchọrọ igosipụta na saịtị gị. Ọ dịghị mkpa maka photoshoots ma ọ bụ ụdị… ọ niile wuru na-!
Mbipụta na-elekọta mbipụta akwụkwọ, nyefee, yana ịnakwere nloghachi nke ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ihe kpatara nloghachi ahụ bụ ihe kpatara nkebi - ha na-ekpuchi mmefu ahụ.
Nkwado m maka ikpo okwu ecommerce dị mfe iji bụ Shopify. Ọ bụ ihe amamịghe, nwere ndebiri ndebiri zuru ezu, ma nwee njikọ dị ịtụnanya yana ọtụtụ nyiwe ndị ọzọ iji jikwaa, zụọ ahịa ma bulie azụmaahịa ecommerce gị.
Ozugbo inwee saịtị ecommerce na-arụ ọrụ, ezughị. Aga m edebanye aha maka Klaviyo. Klaviyo ga-edozi ihe niile site na ntinye aka akwụkwọ akụkọ, onyinye popup (na ebumnuche mpụga), ihe ncheta ụgbọ ibu azụmahịa echefuru… na ihe niile dị n'etiti